Kanex Inosheedzera Zvitsva Zvekuchaja zveApple Watch | Ndinobva mac
Kanex Inosheedzera Zvitsva Zvekuchaja zveApple Watch
Kwenguva yakati tanga tichitaura nezve chishongedzo cheKanex cheApple Watch, ichi chinongedzo hachisi chimwe kunze kwenzvimbo yekuchaja yewatch yeApple yatinogona kutora kwese kwatinoda sezvo ichisanganisira yega charger. Mushure menguva yakati yekutengesa, ichi Kanex chishongedzo chakawana yakanaka portfolio yevatengi uye ikozvino vanotiratidza isu nevevamwe vafambi shamwari dzakafanana neyekutanga Kanex GoPower Tarisa, iyo GoPower Watch Mira uye iyo Kanex Mini Keychain Bhatiri, ese ari Apple MFi Certified.
1 GoPower Wona Mira
2 Mini Keychain Bhatiri
3 Mitengo uye Kuwanikwa
GoPower Wona Mira
Ichi chimiro kana cheji yekumira yewachi, inowedzera chiteshi cheUSB kumusana kuti ikwanise kuchaja iyo iPhone kana chero chimwe chishandiso kuwedzera kune wachi. Mune ino kesi isu zvakare tine mukana wekuchaja wachi yedu ingave iri 38 kana 42 mm uye tambo inosanganisirwa kuti ibatanidze iyo yazvino sezvo ichi chishongedzo chisiri chemari yekukurumidzira, Iko kuisa pamba uye kusiya wachi patinenge tichida kuichaja.
Mini Keychain Bhatiri
Izvi zvakada kufanana neGoPower iyo yavakaratidza ingangoita mwedzi mina yapfuura, mune ino iri charger yechimbichimbi kune avo vanoda kubhadharisa kunze kwemusha. Zvakare mune ino kesi nekuda kweiyo diki saizi isu tinogona kuitakura ichirembera seiyi kiyi yekutenda kune rin'i iyo inosanganisa uye nekureruka kweiyo yakaiswa. Ichokwadi kuti mune iyi saizi saizi inokosha, sezvo iri diki kwazvo bhatiri i1.000 mAh iyo inotibvumidza isu kuita imwechete kubhadharisa kune wachi, zvichienzaniswa ne4.000 mAh yeGoPower Watch, sezvo ivo vachigona kuve vashoma dzimwe nguva. Mune ino kesi, iyo microUSB tambo inowedzerwa kuribhadharisa uye iyo LED inoratidza iwo mwero wekuzvimiririra kwebhatiri.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Kanex Inosheedzera Zvitsva Zvekuchaja zveApple Watch
Yakatsanangurwa yakakwira-resolution resolution yemuchadenga yeApple Campus 2
Bear, nzira nyowani yekugadzira zvinyorwa uye zvinyorwa